Daad gurayntii shacabka magaalada Xalab oo lajoojiyey iyo qaraxyo kadhacay. – Radio Daljir
Daad gurayntii shacabka magaalada Xalab oo lajoojiyey iyo qaraxyo kadhacay.
Diseembar 16, 2016 9:26 g 0
Xalab, Dec 17 2016-Kumanaan qof ayaa weli ku xaniban bariga magaalada ay dagaaladu aafeeyeen ee Xalab ama Allepo ee dalka Siiriya, iyadoo daadgureynta shacabka magaalada oo shalay bilaabatay la hakiyey.
Warbaahinta dowladda Syria ayaa sheegtay in mucaaradku ay jebiyeen heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ay la galeen dowladda ayna weeraro ku soo qaadeen goobo ay joogeen cidamada dowlada ee ruushku taageero.
In ka badan 3,000 oo qof ayaa Khamiistii basas looga qaaday xaafadaha uu burburka weyn soo gaaray, iyadoo la geeyey gobolka Idlib hase yeeshee Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in ilaa iyo 50,000 oo qof ay weli ku xayiran yihiin halkaasi.
Ciidammada dowladda oo taageero ka helaya xulafadooda Ruushka ayaa waxa ay todobaadkan la wareegeen ku dhawaad dhammaan qeybihii ay Xalab ka maamulayeen kooxaha mucaaradka.
Guddiyada doorashada maamul goboleedyada oo farriin loo diray.